Posted on January 3, 2018 November 20, 2020 by csr 1687
Mabasa Anonakidza Evakuru
Vakwegura vanowanzo kuve vakasungwa pamba ipapo vadiki vakuru vakuru. Nechikonzero ichi, vanogona kunetseka nguva nenguva uye havazive chero pfungwa dzakanaka dzekuyedza. Kana iwe uri muchengeti saka unogona kuziva kurwa kwekuuya nezviitwa zvevakuru kuti vatore chikamu. Kune chikamu chikuru, vanonakidzwa kutora chikamu mune zvakawanda zviitiko. Kana iwe usingazive kurwira uku saka haupedze nguva yakakwana naasekuru vako. Tora imwe nguva navo uye iwe unozoona kuti ivo havanyatso kufambidzana zvakare sekushandisa asi izvo hazvireve kuti havagone kunakidzwa mune izvi zviitiko. Muchikamu chino, tichaenda pamusoro pemafungiro akasiyana aunogona kuyedza nevakuru vako kana vakuru kana iwe uri muchengeti uye uchichengeta vakuru vakawanda.
Iyo yepasirese webhu chimwe chinhu chevakuru havapfuure mune izvo zvinobatsira kuvaka kwavo kufarira. Pane zvakawanda zvaunogona kuita paInternet mikana yacho haiperi. Unogona kuvaratidza nzvimbo kuburikidza neGoogle Mepu uye nekwavakabva kuti vaone kana zvichitaridzika kunge zvakasiyana kubva pavaigara ikoko kusvika zvino. Iwe unogona zvakare kutamba mimwe mitambo yemakomputa pamwe pamwe mimwe mitambo yavanoshandisa kufarira vachiri vana nekuti internet inogona kutevedzera yakawanda yemitambo iyi zviri nyore.
Ruzha rwekutamba mitambo yemabhodhi inogona kusanzwika senge yakawandisa kune avhareji mukuru. Vazhinji vakuru vanofarira kutamba nzira yemabhodhi mitambo senge domino's kana macheki. Ose ari maviri emabhodhi emitambo anonakidza uye anovaka chisungo chakasimba pakati pako neako mukuru. Ehe, pane mimwe mitambo yakawanda ipapo iyi miviri kuti ugone kudzvanya pano yemitambo yebhodhi iri kutengeswa kubva kuAmazon.
Kunyora tsamba kunogona kunge kuri kwechinyakare asi sezvo pfungwa yekunyora tsamba iri fossil pfungwa saka chinogona kunge chiri chinhu chinonakidza. Nyora tsamba dzakawanda dzinoshamisika vanhu vazhinji vane vakuru. Pamwe vangada kunyorera dzimwe shamwari dzekare dzavasina kumbotaura nadzo mumakore. Ivo vangangoda kunyorera vana vavo uye kuvashamisa. Rega mukuru aipe pfuti pakunyora tsamba uye chete zvinopa imwe nhungamiro kana vachichida.
Kurudzira zvisikwa kwavari nekuti zvisikwa zvinobatsira kuti varambe vachizviratidza kunyangwe ivo vatove vakuru. Pamwe penda chimwe chinhu kana dhonza chimwe chinhu. Iva nehunyanzvi nenzira uye pamwe pendi yemunwe uye uwane pendi diki pavari. Pendi yemunwe kana pende yenguva dzose zvinhu hadzidhure zvachose uye dzinogona kutengwa kwese kwese. pano chinongedzo kana iwe uchida kuzvitenga online pane kuenda kunze uye kuzvitengera iwe pachako. Ita shuwa kuti unovatorera canvas zvakare kuti vave nechimwe chinhu chekupenda kana kudhirowa.